Curaçao meghere New York, New Jersey na ndị bi na Connecticut naanị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Curacao » Curaçao meghere New York, New Jersey na ndị bi na Connecticut naanị
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Curacao • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Mgbe ọnwa ole na ole ga-atụ anya, Curaçao Tourist Board ji ịnụ ọkụ n'obi kwupụta mmeghe oke ókè nye ndị bi na New York, New Jersey na Connecticut. Malite n’izu mbụ nke Nọvemba, ndị bi na steeti atọ ahụ ekwuru n’elu ga-abụ ndị Amerịka mbụ nyere ohere ịbanye na agwaetiti Dutch Caribbean nke anwụ na-acha na Curaçao ebe ọ bụ na etinyere mgbochi njem na mbido afọ a.
Tupu ha erute, ndị ọbịa niile ga-eweta ihe akaebe na-egosi adịghị mma Covid-19 Ihe nyocha PCR weere n'ime awa 72 nke njem. Iji streamline na ntinye usoro, ọbịa ga-mezue a Digital Immigration Card na dicardcuracao.com, bulite nsonaazụ ọjọọ ha na ọnụ ụzọ mbata, ma mejupụta Kaadị Nchọta Ndị njem (PLC) n'ịntanetị n'ime awa 48 tupu ịpụ. Na mgbakwunye, ndị bi na New York, New Jersey na Connecticut ga-ewetara NJ ziri ezi nke steeti nyere dị ka ihe akaebe nke obibi.
Ugbo elu na-akwụsịghị na Newark Liberty International Airport (EWR) ga-amaliteghachi na Nov. 7 na ọrụ kwa izu na United. N’ọnwa na-eso ya, JetBlue ga-enye ụgbọ elu ugboro abụọ kwa izu site na New York’s John F. Kennedy International Airport (JFK) bido na Disemba 9.
New York, New Jersey na Connecticut sonyere Canada na ahịa ndị ọzọ dị ala ma ọ bụ nke nwere ohere ịbanye na Curaçao, bụ ndị akpọrọ otu n'ime agwaetiti kacha mma na Caribbean na Nhọrọ Ndị Na-agụ Akwụkwọ nke 2020 nke Condé Nast Traveler. Curaçao Tourist Board - na mmekorita ya na Ministri nke Ọha Ọha, gburugburu ebe obibi na Nature, yana Ministry of Economic Development - kọwaa ahịa dị ala na nke dị ala dabere na ọnụọgụ na ọnụọgụ kachasị ọhụrụ sitere na nzukọ mpaghara ọ bụla akọwapụtara.
Paul Pennicook, onye isi oche nke ndị njem njem njem Curaçao kwuru, sị: "Mgbe anyị na ndị sayensị na otu ndị dọkịta amaara ama na Netherlands na n'àgwàetiti ahụ jikọtara ọnụ, anyị kpebiri iji nwayọ mepee ụlọ ọrụ njem njem Curaçao na US." "Ebibara ọtụtụ ihe n'echiche gụnyere okwu ndị dị ugbu a, ikuku ikuku na mmetụta na akụnụba obodo, na ndị ọzọ."
N’ịgbalị ichedo obodo na ụwa niile na nchekwa, na mbido afọ a, Curaçao tinyere usoro iwu gbasara ahụike na nchekwa, akpọrọ “A Dushi Stay, the Healthy Way” - dushi pụtara “ụtọ” na Papiamentu. Usoro ihe omume a gunyere ihe nile site na ozuzu ndi oru na oru ndi mmadu na-eme ka ndi mmadu ghara ichota ya. Sistemụ nlegharị anya ọfịs nke ụlọ ọrụ ahụ ike ọha na-ahụ nke agwaetiti ahụ na-agụnye ịkpọ oku ekwentị ahaziri nye ndị ọbịa niile na-abata n'oge ha na Curaçao.
Ọzọkwa, iji mezuo ozi nile dị mkpa n'ụzọ dị mfe, òtù ndị njem nleta mepụtara ngwa a na-eji agagharị agagharị nke a na-akpọ “Dushi Stay.” Otu n'ime ngwa ngwa mbụ nke ụdị a, Dushi Stay na-enye ndị njem ohere ịbanye na ntinye, usoro iwu ọhụụ nke agwaetiti niile, nọmba kọntaktị mberede na ndụmọdụ ahụike, yana ụlọ oriri na ọ openụ ,ụ na-emepe emepe, ebe nkiri, osimiri, wdg na mkpịsị aka ha.
"Anyị ga-anọgide na-enyocha ihe omume na United States ndị ọzọ," ka Pennicook na-agbakwụnye. “Ka anyị nwere ọ enjoyedụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ sitere na ahịa US na afọ ole na ole gara aga na akaụntụ US maka akụkụ dị mkpa nke ndị njem njem njem Curaçao, anyị na-atụ anya mmeghe nke obodo ndị ọzọ ọnụ ụzọ ámá ozugbo ọnọdụ kwere ka ndị America nwere ike ịga n'ihu na-enweta ebe a pụrụ iche. ”
Ndepụta SAS nke ebe ọhụrụ ụlọ na mba ụwa na -aga ...
Ụgbọ elu si USA na Martinique na ụgbọ elu ndị America ugbu a
Ndi otu ndi too Otuto Congressional Action On Fair And Open ...